कुन उमेरलाई ‘पहिलो पटक’ यौनसम्बन्ध राख्ने उचित उमेर मानिन्छ ? – Bannigadhi Today
एकेन्द्र खत्री २०७७ फागुन ११, मंगलबार १७:२४
पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरिका सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ ।
नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन । यहाँ विवाह अघि यौनसम्बन्ध राख्न बर्जित छ । तर, पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन । ती समाजमा दुबैको इच्छा चाहनामा भरपर्ने हुन्छ । निश्चय नै यौनसम्बन्धका लागि कुनै नियम छैन । यौन चाहनालाई नियमले बाँध्न पनि सकिदैन । अवस्था र उमेरले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ ।
कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राख्दा आफ्नो कौमार्य गुम्ने बताइन्छ । ब्रिटेनमा गरिएको एक अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी युवती र एकचौथाइभन्दा बढी युवकले आफूले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा आफ्नो उमेर नपुगेको स्वीकारेका थिए । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने यौनसम्बन्ध राख्न पनि शारीरिक रुपमा सक्षमताको आवश्यकता पर्दछ ।
विकसित देश ब्रिटेनमा यौनसम्पर्क राख्ने सहमति जनाउन कम्तीमा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
केही समय अघि सार्वजनिक गरिएको नेशनल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिट्युड्स एन्ड लाइभस्टाइल्सका अनुसार १६ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरू पहिलो यौनसम्पर्कका लागि तयार नभएका हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
एक अर्को अध्ययनमा सहभागीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत महिला र २६ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो पहिलो यौनसम्पर्क सही समयमा नभएको अनुभूति गरेको बताएका थिए ।
यस विषयमा थप प्रश्न गर्दा धेरैले आफूले कौमार्य गुमाउन केही समय कुरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । केहीले भने अगाडि नै यौनसम्पर्क राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको बताएका थिए ।
अधिकांश सहभागीले १८ वर्षको हुँदा यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए भने आधाले १७ वर्ष नपुग्दै कौमार्य गुमाइसकेका थिए ।
झन्डै एकतिहाइले भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरमै यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए ।
उदाहरणका लागि त्यो समयमा उनीहरू मादक पदार्थको प्रभावमा थिए कि वा सहमतिका लागि साथीले दबाव पो दिएका थिए कि भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।
त्यसैगरी अमेरिकी मनोचिकित्सक डा. मर्लिन वाकरले १८ वर्षको युवावस्थामा यौनसम्पर्कको चाहना अति उच्च विन्दुमा पुग्ने बताएका छन् । उनले यो उमेर समूहकालाई हरेक क्षण उत्तेजित र मनमा अनेकौँ कामुक विचारहरु आउने बताएका छन् ।